Raisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo goordhaw la filayo in ay gaaraan magaalada baladweyne – STAR FM SOMALIA
Raisul Wasaaraha Soomaaliya iyo Wafdi uu Hogaaminayo oo goordhaw la filayo in ay gaaraan magaalada baladweyne
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke iyo xubno katirsan Labada Golle ee Dowlada Federaalka Soomaaliya ayaa lagu wadaa in ay goordhaw gaaraan magaalada Baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Garoonka Diyaaradaha Ugaas Khaliif ee magaaalada Baladweyne waxaa xiligan ku sugan masuuliyiin iyo saraakiil katirsan Ciidamada Dowlada iyo AMISOM, kuwaa oo isku diyaarinaya soo dhaweynta Ra’isul Wasaaraha iyo Xubnaha la socda.
Amaanka magaalada Baladweyne ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana wadooyinka muhiima a ee magaaladaasi lagu arkayaa ciidamo badan oo isugu jira kuwa Dowlada iyo AMISOM, kuwaa oo xaqiijinaya amaanka.
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Soomaaliya ayaa la filayaa in uu magaalada Baladweyne kula kulmo Masuuliyiinta maamulka Gobolka iyo waxgaradka magaladaasi oo kasoo horjeeda ka qeyb galka Shirka maamul u sameynta Gobolada Hiiraan iyo Shabeelaha Dhaxe .
Qarax Khasaare geystay oo ka dhacay Degmada Qansaxdheere ee Gobolka Baay
Haweenay uur leh ayaa u geeriyootay macluul deegaanka Ambareeso ee degmada baraawe